Polonina: Hanao Sonia ny Fifanekena ACTA Ny Governemanta Na Dia Eo Aza Ny Hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2012 10:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, srpski, 日本語, Español, English
“Tsy dia manova firy ny lalàna Poloney na ny zon'ny mpiserasera sy ny fampiasana Aterineto ny fifanekena Acta” – na dia teo aza ny ny hetsika goavana tamin'ny Aterineto sy ny adihevitra mikasika ny fomba fifanarahana mangingina, dia nanamarina ny Minisitry ny Fitantanana sy ny famadihana ho nomerika ny asa, Michal Boni, taorian'ny fihaonana tamin'ny Praiminisitra Donald Tusk fa hanao sonia ny fifanekena mikasika ny fanoherana ny fanaovana piraty antserasera ACTA ny governemanta amin'ny 26 Janoary, araka ny niomanana.
Nandritra ny fanadihadiana tamina onjam-peo iray, nilaza i Boni fa sarotra ny tsy hanao sonia izany fifanekena izany, satria efa tara loatra: Efa niditra tamin'ny fifanarahana i Polonina tamin'ny taona 2008 ary efa nanao sonia izany avokoa ny firenena Eoropeana hafa rehetra. Nilaza ihany koa izy fa “tokony hametraka fepetra amin'ny fifanekena i Pologne mba hampiseho ny fomba handikantsika ny andinin-dalàna”.
Nampanantena i Boni fa hisy ny fanontaniana faobe ny vahoaka mandritra ny fotoana ankatoavan'ny Eoropa ny fifanekena. Fikambanana tsy miankina Poloney maromaro no naneho ny fahadisoam-panantenany manoloana ny fanapaha-kevitry ny governemanta mikasika ny ACTA ka mangataka azy ireo mba hanova izany fanapaha-kevitra izany.
Nanomboka ny 21 Janoary, “hackers” miantso ny tenan'izy ireo ho Anonymous no nanafika sy nanakatona ny tranokalan'ny governemanta hatrany hatrany, tao anatin'ny hetsika misavoritaka ho fanoherana ny fikasan'ny governemanta hankato ny fifanekena iraisam-pirenena amin'ny Alakamisy [26 janoary] izao.
Maciej Gajewski ao amin'ny Spidersweb miantso azy ireo ho “ankizy manahy ny amin'ny mp3-ny” sy malahelo fa lasa izy ireo no endriky ny hetsika, ka manome porofo ho an'ny governemanta ny hanoherana ny hetsi-panoherana ny ACTA :
Koa satria manohitra ny fanafihana ny tranokalan'ny governemanta i Antyweb dia niantso tao amin'ny bilaoginy tamin'ny 23 Janoary mba hanao hetsika” amin'ny fomba mendrika=mahalala fomba, izay antsoina hoe, blackout” ka namorona torolalana sy toromarika amin'ny fanatanterahana izany izy. Ho setrin'izany, tranokala maherin'ny 900 no hiloko “mainty” sy hampiseho hafatra manohitra ny ACTA.
Allegro, Poloney mitovy amin'ny Ebay, nametraka soram-baventy”manohitra ny ACTA” teo akaikin'ny fangon’ (logo) ny orinasa. Azo jerena eto ny lisitr'ireo tranonkala mandray anjara amin'ny hetsika.
Ny antokon'ny mpanohitra Democratic Left Alliance (Fiarahana demokratika ankavia), nilaza fa tokony tsy hanao sonia ilay fifanekena ny governemanta ka nampiasa ny loko mainty tamin'ny tranokalany ihany koa izy ireo ho firaisankina.
Raha tsy nisy niresaka momba ny hetsika tany Polonina ny fampahalalam-baovao iraisampirenena, ankoatra ny hafa vitsivitsy, dia ny fampahalalam-baovao tao an-toerana kosa nihazakazaka tamin'ny famoahan-kevitra am-polony, mbamin'ny fanadihadiana ary ny vaovao farany momba ny raharaha ACTA. Nandritra izany, niha nahazo hery hatrany ny hetsi-panoherana ny ACTA: nahatratra 400.000 mahery ireo mpandray anjara tamin'izany tao amin'ny Facebook Nie dla ACTA.
Hetsika an-dalambe no niseho tao Varsovia izay nahavoriana olona maherin'ny 1,000 tamin'ny Talata, ary hetsika hafa kosa no efa nokarakaraina tamin'ny Alarobia 25 Janoary.
Vagla, mpamaham-bolongana fanta-daza mpiaro ny zo an'aterineto, nizara ity fanantenana ity tao amin'ny Twitter ny 24 Janoary:
Ny harivan'ny 24 Janoary, PM Tusk nanamafy tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety fa hanao sonia ny fifanekena i Polonina amin'ny 26 Janoary. Nilaza koa izy tamin'izany fa tsy hihemotra manoloana ny fampitahorana, ary niresaka momba ny fanafihana tranokala vao haingana. Mitolona ho amin'ny fahalalana amin'ny aterineto i Polonina, araka ny filazan'i Tusk.